1 >> Category: ဘဏ်လုပ်ငန်း
စီးပွားရေးသီအိုရီထဲမှာ, အကျယ်ပြန့်အဓိပ္ပာယ်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုင်ဆိုင်၏ဝယ်ယူမှုအဖြစ်တတိယပါတီများမှမှယာယီအသုံးပြုရန်အတွက်၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှု၏ပြဋ္ဌာန်းချက်နှငျ့ပတျသကျသောအတိတ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာသို့မဟုတ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ၏ရလဒ်အဖြစ်ရယူရနိုင်သောအနာဂတ်စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများများအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်တာဝန်ဝတ္တရားပြန်ဆပ်ဖို့အသုံးတဆင့်ပိုင်ရှင်မှတနျဖိုးကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုအဘို့ထိုသူတို့ဖလှယ်, ကိုရွေးနှုတ်သောလိုအပ်ချက်များကိုမှာ၎င်း၏ပိုင်ရှင်မှအမြတ်အစွန်းကိုရောက်စေဖို့စွမ်းရည်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအတူဆက်စပ် အနာဂတ်စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်။ ပိုင်ဆိုင်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများများသောအားဖြင့်ပိုက်ကွန်ကိုငွေသား၏ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်၏ပုံစံယူပါ။ တစ်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်စီးပွားဖြစ်ဘဏ်မဆိုသယံဇာတ, ငွေသားထက်အခြား, ရများကိုတစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်အခြားသယံဇာတများနှင့်အတူပေါင်းစပ်တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်, အနာဂတ်အတွက်ငွေသားစီး ကိုအဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုများကို - ။ ဤဆောင်းပါးစာရင်းကိုင် စီးပွားဖြစ်ဘဏ်အရင်းအမြစ်များကိုနေရာချထားနှင့်အသုံးပြုမှုထင်ဟပ်ဟန်ချက်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှု ကို T.
interbank ချေးငွေ အမျိုးအစားများ
မည်မဟုတ်ပါချေးငွေများစီးပွားရေးနှင့်စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ငွေပေးငွေယူမှတိကျတဲ့ဂုဏ်သတ္တိများ၏တစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ ချေးငွေ၏ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်, အဖွဲ့အစည်း features တွေချေးငွေ၏ထုတ်ပေးရေးနှင့်ပြန်ဆပ်ပေါ် မူတည်.
စီးပွားဖြစ်ဘဏ်များ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုဖော်ပြ အဓိကစာရွက်စာတမ်း, ချိန်ခွင်လျှာဖြစ်ပါတယ်။ အ, လစဉ်သုံးလတစ်ကြိမ်နှင့်နှစ်စဉ်ချိန်ခွင်လျှာစာရွက်များဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်းကုမ္ပဏီမတူဘဲ, စီးပွားဖြစ်ဘဏ်များဖွင့်ပါစေနှင့် intrabank စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်ကြောင်းနေ့စဉ်ခွင်။ သူတို့ရဲ့စုစည်းလည်ပတ်ထိန်းချုပ်မှုအကောင်အထည်ဖော်မှု, ဘဏ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများ၏သုံးသပ်ချက်နှင့်ဘဏ်မှာအလုပ်တိုးတက်လာဖို့မှန်ကန်သောအစီအမံ၏မွေးစားဘို့လိုအပ်ပါသည်။ အသီးအသီးစာရင်းကိုင်သံသရာ၏အစအဦးမှာဖွင့်လှစ်ချိန်ခွင်လျှာစာရင်းကိုင်နှင့် operating ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု၏လုပျငနျးကစတင်ခဲ့သည်နှင့်တကွ, သံသရာရဲ့အဆုံးမှာနောက်ဆုံးလက်ကျန်ငွေပြီးစီးခဲ့နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအသစ်တခုသံသရာကစတင်ခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ျာဘက်၌များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် liabilities ၏လက်ဝဲအစိတ်အပိုင်း:အဆိုပါဟန်ချက်အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုပါဝင်သောစားပွဲတစ်ခုတက်ဆွဲအားဖြင့်သဘောပေါက်သည်။ အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီးပွားဖြစ်ဘဏ်ရန်ပုံငွေများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် liabilities အတွက်ကြသည် - သင်ယူမှုသို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏သတင်းရင်းမြစ်။ စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်း liabilities တူညီသော။ ဤအရလဒ်များ၏ပြင်းအား ချိန်ခွင်လျှာစာရွက်စုစုပေါင်းဟုခေါ်သည်။ Balance စီးပွားဖြစ်ဘဏ်လက်ကျန်ငွေစာရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်တစ်ချိန်တည်းမှာဟန်ချက်စာရွက်ပစ္စည်းများ၏အကွာအဝေးအကောင့်အသစ်များ၏တစ်ဦးဇယားသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ချိန်ခွင်လျှာစာရွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပြည်နယ်ထင်ဟပ်နှင့်ဘဏ်ရန်ပုံငွေအဖြစ်ချေးငွေမှာသူတို့ရဲ့နေရာချထားခြင်းနှင့်အခြားတက်ကြွစစ်ဆင်ရေးဆွဲဆောင်။ အလိုအရချိန်ခွင်လျှာလေ့ကျင့်ခန်းဘဏ်ရဲ့ငွေသားအရင်းအမြစ်များစုစည်းနေခြင်းနှင့်ဖြန့်ကျက်ကျော်ထိန်းချုပ်;
element ကသူ့ဟာသူရည်ရွယ်ချက်များ၏ဘဏ်ရဲ့စနစ်၏အဆငျ့ဖြစ်ခြင်း, မဟာဗျူဟာတစ်ဆင့်ပေးသောစနစ်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အမေရိကန်ကစီးပွားရေးစာပေအ​​တွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာ၏လေးအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်:ငါကော်​​ပိုရိတ်မဟာဗျူဟာ;
ခေတ်သစ်ဘဏ်စနစ်များအတွက်နှစ်ခုအခြေခံ feature များဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်:ပထမ, စနစ် - ချိန်ညှိခြင်းနှင့်, အကြွေးဆက်ဆံရေး၏တတိယအမျိုးအစားဗဟိုဘဏ်ကဗဟိုစည်းမျဉ်းရရှိထားသူ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများအခြေအနေများအတွက် Self-စည်းမျဉ်းများနှင့်အတူ, နှင့်ဒုတိယအ, စျေးကွက်အကြွေးအဖွဲ့အစည်းများ၏လှုပ်ရှားမှုများကို၏အဆုံးရလဒ်တခုတိုးယှဉ်ပြိုင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဈေးကွက်ထဲမှာဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ်၏ ဘဏ်စနစ်အတွက်ဗဟိုဘဏ်နေရာ အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာ အရင်းရှင်စနစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အစောပိုင်းအဆင့်၌, ဘဏ်တွေကထိပ်တန်းအဆင့်ထုတ်လွှတ်မှုဟုခေါ်တွင်။ သို့သော်သီအိုရီနှင့်အလေ့အကျင့်အတွက်သက်တမ်း "ဗဟိုဘဏ်ကိုအသုံးပြုခံရဖို့စတင်ခဲ့ဒါယနေ့အထိ, သူတို့ရဲ့ function ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်" ဗဟိုဘဏ်၏အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာများမှာ: 1 ငွေကြေးဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုစီးပွားရေးကို။ အကြွေးပိုက်ဆံ2ထုတ်လွှတ်;
ကိုအလားတူအခြေအနေမှာအိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီများနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်များ၏ဆက်ဆံရေးအတွက်လေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ တဖကျတှငျ, တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ် realtors အားဖြင့် facilitated အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, ဘဏ်သိုက်အပါအဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏အခြားအမျိုးအစားများသည်အစားထိုးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဘဏ်တွေသူတို့ကိုယ်သူတို့အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်နိုင်ပါ။ ဒီဈေးကွက်ထဲမှာဘဏ်များ၏အစောပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရုံးဝယ်ယူအ​​ဖြစ်တပယ်လုပ်ရပ်တွေကိုနီးပါးသီးသန့်ကန့်သတ်ခဲ့စဉ်ရုရှားကျွမ်းကျင်သူများက, မော်စကိုအိမ်ခြံမြေစျေးကွက်အပေါ် ပို.
အာမခံ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူ Credit ဆက်ဆံရေး
ဒီငြင်းခုံ၏ရွေ့လျားမှု၏ immanent ပုံစံများကိုအကြွေးဆက်ဆံရေးနှင့်ဒုတိယပိုမိုရှုပ်ထွေးအမျိုးအစားပေါ်ပေါက်ရေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်ပါသည် - အာမခံ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူ ကိုခရက်ဒစ်ဆက်ဆံရေး။ ထိုအကြွေးထဲမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြားခံ၏အရေးအပါဆုံးအမျိုးအစားသင်တန်း၏ဘဏ်များသည်။ တစ်ဦးအထူးပြုအကြွေး-ပေမယ်-အခြေချအဖွဲ့အစည်းဂျီနိုအာအတွက် 1407 ခုနှစ်တွင်အီတလီမှာအစပြုအဖြစ်ပထမဦးဆုံးဘဏ်, "ဟုအဆိုပါ Banco di စန်း Giorgio "။ Credit ဆက်ဆံရေးနှင့်၎င်းတို့၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ဒါဟာအတွက်သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည် အာမခံ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူအကြွေးဆက်ဆံရေးဖြစ်ပျက်မှုအခြားသူများအားအကြွေးဆက်ဆံရေးတယောက်အမျိုးအစားငြင်းပယ်ဖြစ်ပေါ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြွေးဆက်ဆံရေး၏ပထမဦးဆုံးအမျိုးအစားများ၏ဖျက်ဆီးခြင်း၏ငြင်းပယ်မဆိုလိုပါ။ ကျနော်တို့ရည်မှန်းချက်စကားဝိရောဓိနှငျ့ဆကျဆံရာတှငျ, သူတို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်၏အတိုင်းအတာအားဖြင့်ရှေးအသစ်ဒြပ်စင်အတွက်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်အကြံပြုခြင်း, ထိုစကား negation ဖြစ်ပါတယ်ကြသည်ကတည်းက။ ဒီတော့ပြည်တွင်းရေးဝိရောဓိများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာရရှိလာတဲ့ကြားခံနှငျ့ပတျသကျသောချေးငွေအကြွေးဆက်ဆံရေးကိုပျေါပေါ။ ဒီအမျိုးအစားကရက်ဒစ်ဆက်ဆံရေး၏အရေးအပါဆုံးပုံစံကိုကြားခံ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဘဏ်သောအဘို့ဘဏ်ချေးငွေဖွစျသညျ။ ဘဏ်စနစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပေမယ့်သည့်အခါပေးသောသူနှင့်ငှါးသောသူအကြားငြင်းခုံကပျောက်ကွယ်သွားလျှင်?